Tele RELAY တစ်ခု - ဒါဟာသူ့ရဲ့တက်စလာမော်ဒယ်3သော့ဖွင့်နိုင်ရန်အတွက်လက်ရုံးတစ်ဦး RFID ချစ်ပ်ကိုထညျ့သှငျးဖြစ်ပါတယ်
မူလစာမျက်နှာ » TECH & Telecom "ဒါဟာသူ့ရဲ့တက်စလာမော်ဒယ်3သော့ဖွင့်နိုင်ရန်အတွက်လက်ရုံးတစ်ဦး RFID ချစ်ပ်ထသတ်မှတ်
ဒါဟာသူ့ရဲ့တက်စလာမော်ဒယ်သော့ဖွင့်နိုင်ရန်အတွက်လက်ရုံးတစ်ဦး RFID ချစ်ပ်ကိုထညျ့သှငျးဖြစ်ပါတယ် 3
Transhumanism အသစ်တစ်ခုအယူအဆမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်ဝတ်စရာများထွန်းကားခြင်းနှင့် ပို. ပို. miniaturized နည်းပညာနှင့်တကွ, ဖြစ်နိုင်ခြေအဆုံးမဲ့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အစဉ်အဆက်ထက်သူတို့ရဲ့ installation ကိုပိုမိုလွယ်ကူ။ တချို့ကထိုးဖို့တှနျ့ဆုတျကြပြီမဟုတ်။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် microchip သို့မဟုတ်အခြားနည်းပညာ implanting ၏စိတ်ကူးသစ်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ အချို့ကသူ၏နေအိမ်တွင်ဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ်ပင်အလုပ်အမှတ်မှာရန်, ဆပ်ဖို့, လက်၌ချစ်ပ်သှငျးပါလိမ့်မယ်, ဒီလယ်ပြင်၌နာမည်တစ်ခုကိုလည်းပြီ။ ယနေ့ Amie DD biohackeuse တစ်ဦး chip ကိုအသုံးပြုသူမ၏အကြောင်းကိုလုပ် RFID သူ၏လက်ရုံးထဲမှာအရေပြားအောက်ဆုံးထိုးသွင်း။ ဒါကသူ့ကိုပဲချဉ်းကပ်သူ့ကားတစ်တက်စလာမော်ဒယ်3သော့ဖွင့်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ကြောက်စရာ? ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်လား?
ဒါဟာလက်မောင်းတစ်ခု RFID ချစ်ပ်ကိုထညျ့သှငျးဖြစ်ပါတယ်
DD ရည်းစားထားပြီးသူ၏လက်ရုံးထဲထညျ့ထားတဲ့ RFID ချစ်ပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကဲ့သို့သောသူမဟာသူရိုးရှင်းစွာကပြောသည် chip ကို၎င်း၏တက်စလာများအတွက်သတင်းအချက်အလက်လွှဲပြောင်းနိုင်စဉ်းစားမိတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထုတ်လုပ်သူများကထူထောင်ဘေးကင်းခြင်း, အရာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖြစ်ခဲ့သည်။ Amie DD သူ့ကားသော့ကိုမှအ RFID ချစ်ပ် recover ခဲ့ရတယ်နှင့်လက်မောင်းမှာသူ့ဟာသူ implanting သိရသည်။ ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာမဆိုရောဂါကူးစက်သို့မဟုတ်ပြဿနာများကိုရှောင်ရှားရန်တစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မှတဆင့်သွားကြဖို့အကြံပြုလိုတယ်ထက်ပိုသော်လည်းအချို့ကိုမိမိတို့ကိုယ်ကိုပြုသကဲ့သို့တစ်ဦးကမျှမျှတတရိုးရှင်းတဲ့။
အဆိုပါတက်စလာမော်ဒယ်3သော့ဖွင့်ဖို့
ဒါကြောင့်အထူးသဖြင့်ကိစ္စအတော်လေးလိမ်းသောအရာကို transhumanism, လူ့အခွအေနေတိုးတက်လာဖို့နည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်းကိုထောက်ခံအားပေးသောဤယဉ်ကျေးမှုနှင့်အသိပညာဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု, စိုးရိမ်အထူးသဖြင့်အဖြစ်မဆိုအမှုအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်း "hack" ဖြစ်ပါတယ် လူသား၏ရုပ်ပိုင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်။ သငျသညျ (င) စိတ်ဝင်စားပါကသင်သည်အောက်ပါဗီဒီယိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Amie D ကိုကအထူးပြုအဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်နိုင်ရန် chip ကိုနှင့်အချက်ကိုပြန်လည်သက်သာဘယ်လိုပြသထားတယ်။ အရမ်းတုန်လှုပ်ဖွယ်အဘယ်အရာကိုမျှပြီးနောက်အားလုံး, ဒီဤတွင် ... ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဘို့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်ရှိခဲ့သည်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်မှာနှင့်အတူဖြစ်မယ့်မိန်းမငယ်၏လက်ရုံးတစ်ဦးကျည်ဆံဖြစ်ပါသည် ပြဿနာများကိုလျှင်ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေမယ့်အဓိကသော့ချက်ရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲကားသော့ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
ဤသည်မှားယွင်းသော Lightning cable ကိုသင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်တစ်ဦးဝေးလံခေါင်သီ access ကိုဖွင့်လှစ်မယ့် malware တွေကိုပါရှိသည်
Apple က privacy ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်နောက်ထပ် Siri ကိုစုံစမ်းမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအစီအစဉ်ကိုရပ်ဆိုင်း
10 000 ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများကျော်င်တစ်ဦး hard drive ကိုလမ်းလွဲနယူးယောက်စီးတီးကနေမီးသတ်သမား
အဆိုပါစမတ်လက်ပတ်နာရီ Misfit ၏အခိုးအငွေ့ X ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 200 ၏စျေးနှုန်းမှာယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။